Akụkọ - Usoro nrụpụta ọla kọpa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Usoro nrụpụta ọla kọpa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
N'ịbụ ndị na-adọrọ mmasị dị elu na ngwaahịa dị iche iche nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-ele ọla kọpa anya dị ka ihe dị iche iche.
A na-emepụta foil ọla kọpa site na usoro nrụpụta akọwapụtara nke ọma n'ime igwe igwe foil nke gụnyere ma ntụgharị ọkụ na oyi.
Tinyere aluminom, a na-etinye ọla kọpa n'ọtụtụ ebe na ngwaahịa ụlọ ọrụ dị ka ihe na-agbanwe agbanwe n'etiti ihe ndị na-abụghị ígwè. Karịsịa n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọchịchọ maka foil ọla kọpa anọwo na-arị elu maka ngwaahịa eletrọnịkị gụnyere ekwentị mkpanaaka, igwefoto dijitalụ, na ngwaọrụ IT.
A na-emepụta foils ọla kọpa dị mkpa site na electrodeposition ma ọ bụ ntụgharị. Maka electrodeposition ọla kọpa dị elu ga-agbaze n'ime acid iji mepụta electrolyte ọla kọpa. A na-agbaba ihe ngwọta electrolyte a n'ime akụkụ nke mikpuru, nke na-agbanwe agbanwe nke ejiri ọkụ eletrik. N'elu ilu ndị a, a na-etinye ihe nkiri dị mkpa nke ọla kọpa electrodeposited. A na-akpọkwa usoro a dị ka plating.
N'ime usoro nrụpụta ọla kọpa nke electrodeposited, a na-edobe foil ọla kọpa na drum na-atụgharị titanium site na ngwọta ọla kọpa ebe ejikọtara ya na isi iyi voltaji DC. A na-ejikọta cathode na drum na anode na-agbanye na ngwọta electrolyte ọla kọpa. Mgbe etinyere igwe eletrik, a na-edobe ọla kọpa na drum ka ọ na-agbagharị n'ụzọ dị nwayọ. Elu ọla kọpa dị n'akụkụ drum na-adị ire ụtọ ebe akụkụ nke ọzọ dị ike. Ka ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-agba ọsọ, ka ọla kọpa na-abawanye ma ọzọ. A na-adọta ọla kọpa ma na-akwakọba na elu cathode nke drum titanium. Akụkụ matte na drum nke foil ọla kọpa na-agafe usoro ọgwụgwọ dị iche iche ka ọla kọpa wee dabara adaba maka imepụta PCB. Ọgwụgwọ ndị ahụ na-eme ka njikọ dị n'etiti ọla kọpa na dielectric interlayer n'oge usoro mkpuchi mkpuchi ọla kọpa. Uru ọzọ nke ọgwụgwọ ahụ bụ ime ihe dị ka ihe na-egbochi tarnish site n'ibelata oxidation nke ọla kọpa.
Foto 1: Usoro nrụpụta ọla kọpa Electrodeposited Figure 2 na-egosi usoro nrụpụta nke ngwaahịa ọla kọpa akpọrepu. A na-ekewa akụrụngwa na-atụgharị ụzọ n'ụdị atọ; ya bụ, igwe igwe na-ekpo ọkụ, igwe igwe oyi na-atụ, na igwe igwe foil.
A na-etolite eriri mmiri dị mkpa ma na-aga n'ihu na ọgwụgwọ kemịkalụ na n'ibu ruo mgbe a kpụrụ ha ka ọ bụrụ ọdịdị ikpeazụ ha. A na-enye nkọwa nhazi nke usoro ntụgharị nke foils ọla kọpa na eserese 2. A na-ekpo ọkụ nke ihe mgbochi ọla kọpa (ihe dị ka akụkụ: 5mx1mx130mm) ruo 750 ° C. Mgbe ahụ, a na-atụgharị ya na-ekpo ọkụ n'ụzọ dị iche iche ruo 1/10 nke ọkpụrụkpụ mbụ ya. Tupu oyi nke mbụ na-atụgharị, a na-ewepụ ihe akpịrịkpa nke sitere na ọgwụgwọ okpomọkụ site na igwe igwe. N'ime usoro ntụgharị oyi, a na-ebelata oke ya na ihe dịka 4 mm ma na-emepụta mpempe akwụkwọ na mkpuchi. A na-achịkwa usoro ahụ n'ụzọ na ihe ahụ na-adị ogologo oge ma ghara ịgbanwe obosara ya. Ebe ọ bụ na enweghị ike ịmepụta akwụkwọ ndị ahụ ọzọ na steeti a (ihe a na-arụsi ọrụ ike nke ukwuu) ha na-enweta ọgwụgwọ okpomọkụ ma na-ekpo ọkụ ruo ihe dịka 550 ° C.